Raajada Gamma: maxay yihiin, astaamaha, isticmaalka iyo khataraha | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 09/07/2021 10:00 | Ciencia
Qeybta fiisigiska nukliyeerka, noocyada kala duwan ee shucaaca jira ayaa la darsaa. Xaaladdan oo kale, waxaannu diiradda saari doonnaa barashada shucaaca gamma. Waa shucaaca elektromagnetic-ka ee ay soo saarto shucaaca shucaaca ee atomka nuclei. Raajooyinkan gamma waxay leeyihiin shucaaca ugu badan ee soo noqnoqda waxayna ka mid yihiin kuwa ugu halista badan aadanaha, iyo sidoo kale shucaaca kale ee ionizing.
Sidaa darteed, waxaan qormadan u hibeyneynaa si aan kuu sheegno waxa ay yihiin astaamaha, muhiimadda iyo isticmaalka shucaaca gamma.
2 Qalabka Gamma ray
3 Waxyaabaha la sameeyay mahadsanidiin shucaaca gamma
Soo koobid, waxaan qori doonnaa astaamaha ugu waaweyn ee shucaaca gamma:
Waa jajabyo aan nasasho badan lahayn maadaama ay ku socdaan xawaaraha iftiinka.
Sidoo kale ma laha lacag koronto maadaama aysan leexin korantada iyo birlabta birlabta.
Waxay aad u yar yihiin awoodda ionizing inkasta oo ay si aad ah u dhex galaan. Gamma rays of radon waxay mari karaan ilaa 15 cm oo bir ah.
Waa mowjado sida iftiinka laakiin aad uga tamar badan raajada.
Isku-darka shucaaca ee lagu nuugo qanjirka oo ka fogaada shucaaca gamma ayaa suurtagal ka dhigaya in la barto qanjirka la yiraahdo iyada oo laga helo xeebta.
Waxay leeyihiin shucaac aad u sarreeya oo mid ka mid ah shucaaca ugu halista badan ee aadanaha, sida shucaaca oo dhan. Khatartu waxay ku jirtaa xaqiiqda ah inay yihiin hirar tamar-sare leh oo aan dib-u-celinayn u dhaawici kara maaddooyinka. oo sameeya unugyo, keenaya isbeddello hidde ah iyo xitaa dhimasho. Dunida korkeeda waxaan ku daawan karnaa ilaha dabiiciga ah ee shucaaca gam-ka ee ku dhaca suuska Radionuclides iyo isdhexgalka shucaaca cosmic-ka iyo jawiga; falaadho aad u yar ayaa sidoo kale soo saara shucaaca noocan ah.
Qalabka Gamma ray
Caadi ahaan, inta jeer ee shucaacani waa ka weyn yahay 1020 Hz, markaa waxay leedahay tamar ka weyn 100 keV iyo dherer dhererkiisu ka yar yahay 3 × 10 -13 m, aad uga hooseeya dhexroorka atom. Isdhexgalka ku lug leh gamma rays ee tamarta laga bilaabo TeV ilaa PeV ayaa sidoo kale la darsay.
Raajooyinka Gamma ayaa aad uga dhex gala shucaaca ay soo saaraan noocyada kale ee shucaaca shucaaca, ama alfa suuska iyo beta qudhunka, iyadoo ay ugu wacan tahay u nuglaanta yareyd ee la falgalka maaddada. Shucaaca Gamma wuxuu ka kooban yahay sawir qaade. Tani waa farqi weyn oo u dhexeeya shucaaca alfa oo ka kooban hellium nuclei iyo shucaaca beta oo ka kooban koronto.
Fotonno, maadaama aysan ku qalabaysnayn cufnaanta, way yar yareeyaan. Mowjadahaan, sharaxaadda ifafaaleyaasha isdhexgalka ee ka dhexeeya aagga elektromagnetic-ka iyo walaxda ma iska indha tiri karo makaanikada farsamada. Raajooyinka Gamma waxaa lagu kala saaraa raajada asal ahaan. Waxaa lagu soo saaraa wareejinta nukliyeerka ama subatomic, xaalad kastoo jirta, halka raajada lagu soo saaro ku-beddelka tamarta sababtoo ah elektaroonigga gala heerarka tamarta bilaashka ah ee gudaha oo ka yimaada heerarka tamarta dibadda ee la qiyaasay.
Maaddaama kala-guurka elektiroonigga ah qaarkood uu dhaafi karo tamarta qaar ka mid ah kala-guurka nukliyeerka, soo noqnoqoshada raajada tamarta sare leh ayaa ka sarreyn karta inta jeer ee tamarta hoose ee gamma rays. Laakiin, dhab ahaantii, dhammaantood waa mawjado elektromagnetic ah, sida hirarka raadiyaha iyo iftiinka.
Waxyaabaha la sameeyay mahadsanidiin shucaaca gamma
Maaddada loo baahan yahay in lagu ilaaliyo gamma raysku aad ayey uga sii dhumuc weyn tahay tan loo baahan yahay in lagu ilaaliyo qaybaha alfa iyo beta. Qalabkan waxaa lagu xannibi karaa warqad fudud (α) ama saxan bir qafiif ah (β). Maaddooyinka leh lambar atom oo sarreeya iyo cufnaanta sare ayaa si fiican u soo jiidan kara falaaraha gamma. Xaqiiqdii, haddii 1 cm oo leedh ah loo baahan yahay in la yareeyo xoogga shucaaca gamma 50%, saameyn isku mid ah waxay ku dhacdaa 6 cm oo sibidh ah iyo 9 cm oo dhulka la cadaadiyey.
Qalabka gaashaaman waxaa guud ahaan lagu cabiraa iyada oo loo eegayo dhumucda loo baahan yahay si loo yareeyo xoojinta shucaaca kala badh. Sida iska cad, marba marka ka sii sareysa ee tamarta fotonku way sii weynaataa dhumucda gaashaanka loo baahan yahay.
Sidaa darteed, shaashadaha qaro weyn ayaa loo baahan yahay si loo ilaaliyo aadanaha, maxaa yeelay shucaaca gamka iyo raajada ayaa sababi kara gubasho, kansar, iyo isbeddellada hidde-wadaha. Tusaale ahaan, warshadaha tamarta nukliyeerka, waxaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo birta iyo sibidhka ka hortagga ulaha, halka biyuhu ka hortagi karaan shucaaca inta lagu guda jiro keydinta usha shidaalka ama fal-celinta xudunta u ah fal-celinta.
Daaweynta shucaaca ee loo yaqaan 'ionizing radiation radiation' waa qaab jireed oo loo isticmaalo in lagu gaaro jeermiska waxyaabaha caafimaadka iyo nadaafadda, wasakhaynta cuntada, alaabta ceeriin iyo wax soosaarka warshadaha, iyo dalabkooda meelaha kale, Mar dambe ayaan arki doonaa.
Nidaamkani wuxuu ku lug leeyahay u soo bandhigida sheyga ugu dambeeya ee la soo baakadeeyay ama wax weyn ama walax in ionizing tamarta. Tan waxaa lagu sameeyaa qol gaar ah oo loo yaqaan qolka irradiation-ka xaalad kasta oo gaar ah iyo waqti cayiman gudahood. Mawjadahaasi waxay gebi ahaanba dhexgalaan alaabooyinka la soo saaray, oo ay ku jiraan alaabada baakadaha badan lagu duubay.
Isticmaalka Cobalt 60 ee daaweynta cudurada burooyinka waa qaab waqtigan aad ugu baahsan dalkayga iyo adduunkaba taas oo ay ugu wacan tahay waxtarkiisa iyo badqabka astaamaha. Waxaa loo yaqaanaa daaweynta cobalt ama daaweynta cobalt iyo ku lug lahaanshaha unugyada burooyinka shucaaca gamma.
Tan awgeed, waxa loogu yeero aaladda daaweynta cobalt-ka, oo ku qalabeysan madax gaashaaman oo ku qalabaysan cobalt 60, waxaana ku qalabaysan qalab si sax ah u xakameeya soo-gaadhista looga baahan yahay xaalad kasta oo gaar ah oo si ku filan loogu daaweeyo cudurka.
Codsigii ugu horreeyay ee ganacsi ee tamarta ionization wuxuu dib ugu soo noqday horaantii 1960. Maanta, waxaa jira kudhowaad 160 warshadood oo wax lagu shubo oo adduunka ka shaqeeya, oo loo qaybiyey in ka badan 30 dal, oo bixiya adeegyo ballaadhan oo loogu talagalay warshado badan iyo kuwa badan.
Sidaad u aragto, in kasta oo ay khatar yihiin, aadamuhu wuxuu awood u leeyahay inuu ka faa'iideysto shucaaca gamma ee meelo badan sida ay ku kallifto daawada. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan gamma rays iyo astaamahooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Raajada Gamma